warbixintii ugu danbeysay itoobiya COVID19 – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA warbixintii ugu danbeysay itoobiya COVID19
warbixintii ugu danbeysay itoobiya COVID19
warbixintuu ugu danbeysay xanuunka saf marka ah ee COVID19 dalka itoobiya maanata waxaa laga helay kiisaskii ugu badnaa oo dhan 66 # kiisaska COVID19 , kuna xidhnaa saldhig boolis iyadoo tirada guud itoobiya ee xanuunkan qabtaa ay gaadhay 389
Waxa lala xidhiidhay raad raacyo ka yimid hal qof oo lagu tijaabiyey oo laga helay xanuunka waxay keentay dhowr qof oo kale oo la tijaabiyey in laga helo, oo ka mid ah toddobo iyo toban qof oo si ku-meel-gaar ah loogu hayay saldhigga booliiska ee degmada Wajeer 03 ee magaalada Lideta.
Tijaabooyin dheeri ah oo laga sameeyay isla isla saldhiggaas ayaa muujinaya 40 maxaabiis oo dheeraad ah oo laga helay fayras illaa iyo markaas.
Tan waxaa ku xigay sagaal qof oo kale oo isla isla xaruntii ka mid ah oo u ku dhacay fayraska shaqadooda darteed. Dr. Cabaas Eba ayaa sidaa yidhi ” wadarta Guud ahaan 66 qof ayaa laga helay cudurka fayraska.
Sida laga soo xigtay Dr. Eba, Lideta iyo Addis Ketema Kifle Ketemas (hoosaadka magaalada) ayaa ah kuwa ugu dhibka badan ee ay jiraan in kabadan 40% kiisaska dhexdooda ah.
La xiriirida raad raacyada ka dib hal qof oo laga baaray cudurka ayaa keentay dhowr qof oo kale oo tijaabiyey togan, oo ka mid ah toddobo iyo toban qof oo si ku-meelgaar ah ugu xiran saldhigga booliiska ee degmada Wajeer 03 ee magaalada Lideta. Tijaabooyin dheeri ah oo laga sameeyay isla isla saldhiggaas ayaa muujinaya 40 maxaabiis oo dheeraad ah oo laga helay fayras illaa iyo markaas. Tan waxaa ku xigay sagaal qof oo kale oo isla isla xaruntii ka mid ah oo u ku dhacay fayraska shaqadooda darteed. Dr. Cabaas Eba ayaa yidhi “Isugeyn dhan 66 qof ayaa laga helay fayras laga helay fayras.
Wadan ahaan, viruska waxaa laga soo sheegay todobo gobol iyo laba maamul magaalo (Addis Abeba iyo Dire Dawa) iyo sidoo kale 40 ka mid ah 80ka maamulo ee guud ahaan dalka, Dr. Lia ayaa tiri. Addis Abeba waxaa ka mid ah 48% kiisaska.
Kordhinta tirada bukaannada aan lahayn taariikh safar iyo ma lahan raad raacyo la yaqaan waa qaababka kale ee naxdinta leh, sida ay sheegeen labada mas’uul. Dr. Lia ayaa sheegtay in ay metelay 19% wadarta guud ee ah 365 kiis, taas oo ahayd tiradii xilliga saxaafada.
Previous articlewarbixintii ugu danbeysay COVID19 Soomaaliya
Next articleJabuuti oo laga helay 210 kiis oo cusub COVID19
Ingiriiska: “oo Qabtey Dawo been abuur oo la sheegey in lagu...
Sicirka saliida ayaa hoos u dhacay